China Circular Packages fekitori uye vagadziri | Jitai
● Kuvaka dzimba: Iyo yakavharirwa inoumbwa neyakagadziriswa stamping, iyo inoshanda zvakanyanya uye nekudaro yakakodzera kugadzirwa kwemazhinji. Iwo anotungamira anowanzo kudhonzwa kubva pasi zvinoenderana neiyo plug-in yekuisa maitiro.
● Zvinhu zvekuvakisa: Iyo yakavharika inogona kugadzirwa ne4J29 Kovar alloy, 4J42 kana inotonhora yakakungurutswa simbi, ese ayo anozivikanwa nekuvimbika kwakanyanya.
● Sarudzo dzekutungamira: Leads iri cylindrical uye yakatwasuka uye kazhinji inovakwa ne4J29. Vashandisi vanogona kusarudza kubva kucolarar kana 'mbambo yemusoro' dhizaini yekupedzisira yekubatanidza.
● Kutungamira marongero: Leads inodhonzwa kubva pasi neakasiyana masarudziro sarudzo akagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
● Pini yepasi: Nzvimbo yepini yekumisikidza inoonekwawo nezvinodiwa nemushandisi.
● Kuvhara chisimbiso: Zvivharo zvinoshandisa kurova-rova, tinini yekumonera kana laser welding kune chivharo chakavharirwa uye zvakagadzirirwa kuenzanisa denderedzwa reyakavharirwa.
● Ndiro dzekuisa: Vashandisi vanogona kusarudza kubva kuzere kana kusarudza goridhe yakanamirwa pamadziro uye zvinotungamira.
Yakavakwa kuti ikwanise kumira zvakanyanyisa nharaunda, Jitai anotenderera mapakeji, neimwe nzira anozivikanwa sehemmetic zvinongedzo, ane angangoita risingaperi nhamba yekushandisa. Kubva mudenga kuenda kugungwa, isu tinopa zvakajairika uye zvakagadziriswa mhinduro kune yakakura kwazvo mhando yekubatanidza matambudziko. Isu tinogadzira girazi uye zvedongo zvakavharirwa denderedzwa mapakeji anovimbisa kuti akaomarara emagetsi akavharirwa mupakeji anoramba akadzivirirwa kubva kune zvinokuvadza maficha epasi uye nekunze. Jitai inoitisa akateedzana emhando yepamusoro-yekugadzira cheki kuona hunhu hunokuvadza senge okisijeni uye hunyoro hauna nzira yekupinda mukati meyakavharirwa, uku uchiona kuti zvirimo zvinoramba zvakabatana nechinhu chizere.
Pashure: Kupisa Kutengeswa kweChina 2.54mm Pitch 4 Pin Imwe Row Yakareba Pini Male Mukadzi Musoro
Zvadaro: TO Mapakeji